Malii bulchiinsa Amerikaa addunyaafuu fkn tahe kun kama biyya isii keessaa bahe moo biyya biyyaa walti guurratte?Nami heddulleen tanuma gaafata. - Welcome to bilisummaa
Malii bulchiinsa Amerikaa addunyaafuu fkn tahe kun kama biyya isii keessaa bahe moo biyya biyyaa walti guurratte?Nami heddulleen tanuma gaafata.
bilisummaa February 1, 2014	1 Comment
Dr: Hussein Abdo Gadaa Nairob Kenya
Akka jaarroleen Booranaa jettutti gaafii namii akkana bahuu dandahuu bara abbootii gadaa Adii Dooyyoo,Guyyoo Boru,Liiban Jaldeessaa,Boruu Galmaa fa keessa tahuu dandaha.
Adoo tana jennuu qrataa Amerikaa ka bara 1900 keessaa jireenna gadaa Oromoollee ilaaluu dhufe ka akka Arthor Donalson Smith fa beettuu? Torbaan dhufu itti deebinaD
Tags Ameerikaa bulchiinsa mala
Previous Mootummaan Wayyaanee Seeraa Mirga Barattootaa Ugguru Baase.
Next Guyyaan WBO magaala guddoo Ameerikaa, Washington, DCtti sirna ho’aan kabajame.
A bduba koye okotu
Qabeenni Keenan ka farnjiin fudhatte Akka Neuf deebuftu qaami Hindi nutti khullissa; warri wapostulleen dogoggoru danda’a Lichoon ta Guyyoo Galgaloo Indheessaati, Barbaadi faloo waakkayee bahe iyyaati Akkanaatu Argee.